19 Zvino Jehovha akataura naMosesi naAroni, achiti: 2 “Uyu ndiwo murau womutemo wakarayirwa naJehovha, achiti, ‘Taura nevanakomana vaIsraeri kuti vanofanira kukutorera mhou tsvuku yakanaka isina kuremara+ uye isina kumbosungwa pajoko.+ 3 Munofanira kuipa mupristi Eriyezari, uye iye anofanira kuibudisa kunze kwomusasa, uye inofanira kuurayirwa pamberi pake. 4 Mupristi Eriyezari anofanira kubva atora rimwe ropa rayo nomunwe wake, osasa rimwe ropa rayo akananga mberi kwetende rokusanganira kanomwe.+ 5 Mhou yacho inofanira kupiswa iye achizviona. Dehwe rayo nenyama yayo neropa rayo pamwe chete nendove yayo zvichapiswa.+ 6 Mupristi anofanira kutora katanda komusidhari+ nehisopi+ nejira rakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi+ ozvikanda pakati pomoto uri kupisa mhou yacho. 7 Zvino mupristi anofanira kugeza nguo dzake, ogeza muviri wake nemvura, uye apedza izvozvo angapinda hake mumusasa; asi mupristi wacho achava asina kuchena kusvikira manheru. 8 “‘Munhu uya aipisa achageza nguo dzake nemvura uye anofanira kugeza muviri wake nemvura,+ uye achava asina kuchena kusvikira manheru. 9 “‘Zvino munhu akachena anofanira kuunganidza madota+ emhou yacho, oaisa kunze kwomusasa munzvimbo yakachena; uye kuungano yevanakomana vaIsraeri iwo anofanira kushanda sechinhu chakachengeterwa kugadzira mvura yokuchenesa nayo.+ Iwo chinhu chinopiwa chechivi. 10 Munhu uya anounganidza madota emhou yacho anofanira kugeza nguo dzake ova asina kuchena kusvikira manheru.+ “‘Unofanira kuva murau nokusingagumi kuvanakomana vaIsraeri uye kumutorwa ari kugara pakati pavo.+ 11 Ani naani anobata chitunha chomweya womunhu+ achavawo asina kuchena kwemazuva manomwe.+ 12 Munhu akadaro anofanira kuzvinatsa nemvura yacho pazuva rechitatu,+ uye pazuva rechinomwe achava akachena. Asi kana asingazozvinatsi pazuva rechitatu, haazovi akachena pazuva rechinomwe. 13 Munhu wose anobata chitunha, mweya womunhu upi zvake unenge wafa, uye asingazozvinatsi, asvibisa tebhenekeri yaJehovha,+ uye mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pakati paIsraeri.+ Zvaasina kusaswa mvura yokuchenesa nayo,+ iye anoramba asina kuchena. Kusachena kwake kuchiri paari.+ 14 “‘Kana munhu akafira mutende, uyu ndiwo mutemo wacho: Munhu wose anopinda mutende racho, uye munhu wose ari mutende racho, achava asina kuchena kwemazuva manomwe. 15 Midziyo yose yakavhurika,+ isina chivharo chakasungirirwa pairi, ichava isina kuchena. 16 Munhu wose angabata munhu akaurayiwa nebakatwa+ kusango kana chitunha kana pfupa+ romunhu kana guva achava asina kuchena kwemazuva manomwe. 17 Vanofanira kutorera munhu asina kuchena mamwe madota epanopisirwa chinopiwa chechivi, voadira mvura yakachena ari mumudziyo. 18 Munhu akachena+ anofanira kubva atora hisopi+ oinyika mumvura, oisasa pamusoro petende nemidziyo yose nemweya yaiva imomo nepamunhu akabata pfupa kana munhu akaurayiwa kana chitunha kana guva. 19 Munhu akachena anofanira kuisasa pamusoro pomunhu asina kuchena pazuva rechitatu nepazuva rechinomwe uye anofanira kumunatsa pachivi pazuva rechinomwe;+ uye anofanira kugeza nguo dzake ogeza nemvura, uye achava akachena manheru. 20 “‘Asi munhu uya angava asina kuchena uye asingazozvinatsi, chokwadi, mweya iwoyo unofanira kuparadzwa+ pakati peungano, nokuti akasvibisa nzvimbo tsvene yaJehovha. Haana kusaswa mvura yokuchenesa nayo. Iye haana kuchena. 21 “‘Unofanira kuva murau nokusingagumi kwavari, kuti munhu anosasa mvura yokuchenesa anofanira kugeza nguo dzake,+ pamwe nouya anobatawo mvura yokuchenesa nayo. Achava asina kuchena kusvikira manheru. 22 Chinhu chipi zvacho chingabatwa nomunhu asina kuchena chichava chisina kuchena,+ uye mweya unochibata uchava usina kuchena kusvikira manheru.’”+